MSA:-Nabi Muxamed (SCW) oo 5 arin kuu dardaarmay si aad u heshid 5 waxyaabood… | Allkisima.com
MSA:-Nabi Muxamed (SCW) oo 5 arin kuu dardaarmay si aad u heshid 5 waxyaabood…
Waxaa Qoray Admin on Oct 1st, 2010 and filed under Diinta. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
Waxaa jira talooyin uu umadiisa siinayo Rasuulkeena suuban (SCW) waxaana qormadeena ku soo qaadaneynaa hal xadiith.
1- Noqo mid xalaalmiirasho badan waxaad noqoneysaa dadka midka ugu ciibaadada badan oo ugu ciibaado fiican.
Macnaha xadiithku waa in qofku iska ilaaliyo waxyaabaha shakiga ku jiro, hadii uu sidaas yeelana wuxuu noqonayaa qof aan marnaba u dhawaan xaaraamta.
2- Noqo qof ku qanacsan qeybta alle, waxaad noqoneysaa qofka ugu mahad celinta badan alle.
Macnaha wax kasta oo ilaahay kuu qoondeeyey ku qanac, hadii ay noqon lahayd irsaaqada, caruurta, caafimaadka iyo wixii la mid ah, markaas waxaad noqoneysaa qof ilaahay ku shukriya oo u mahad celiya.
3- ulla dhaqan dadka sida aad dooneyso in adiga laguula dhaqmo, waxaad noqoneysaa Mu’min.
Macnaha qof kasta oo Muslim ah la jeclow waxa aad naftaada la jeceshay, sidaasna waxaa xadiith kale ku sheegay Rasuulka (SCW) hadii ay taasi dhacdo waxaad noqoneysaa qof imaankiisu dhameystiran yahay.
4- Dariskaaga wanaag kula dhaqan waxaad noqoneysaa Muslim dhab ah.
Macnaha dariska waa inaad ula mucaamishaa sida ugu wanaagsan, waana dardaarankii nabiga (CSW) waxaana dariska soo galaya reerkaaga, dadka deegaanka kuugu dhow, kuwa aad isla shaqeysaan, asaxaabtaada iyo dhamaan cidii si uun xiriir idinka dhexeeyo, xitaa waxaa lagu amrayaa inaad wanaag kula noolaato dariskaaga aan Muslimka ahayn, xaqa darisnimada wuu leeyahay.
5- Yareyso qosolka si aan qalbigaagu u dhimanin
Macnaha qosolka badan wuxuu dilaa qabliga qofka, waana xubinta ugu muhiimsan xubnaha qofka bini’aadamka ah, qofka waxaa loo baahan yahay inuu qosolka yereysto, waa wax banaan qofku inuu qoslo Saruulkuna (SCW) wuu qosli jiray laakiin ma ahayn qosol badan ee wuxuu u badnaa dhoola cadeyn iyo muusood.
Talooyinkaas wax ku oolka ah waxaa umadiisa u soo gudbiyey Rasuulkeena suuban (SCW) waana macno xadiith saxiix ah.
Qof kasta oo Muslim ah waxaa loo baahan yahay inuu qaato waanada Rasuulka, waana wax anfacaya aduun iyo aakhiraba.
1 Response for “MSA:-Nabi Muxamed (SCW) oo 5 arin kuu dardaarmay si aad u heshid 5 waxyaabood…”
Farxiyo ladan says:
Alle marka hore waa inan ka baqna si aan wanaag u gaarna samena wuxu na faray wana inan ka harnaa wuxu naga reebay raacna jidkii nabi maxamed (swc) si adun iyo aqiro fa.ido u gaarno TW/FIIQDA ALLAHA NA WAAFAJIYO AAMIN